Igumbi lamaphupha - I-Airbnb
Iflethi entle netofotofo eyi-52 sqm, ekwifama yethu, ekwisithili saseTettnang kwindawo ejikelezwe yimithi yeziqhamo nekufutshane neekhilomitha eziyi-8 ukusuka eLake Constance.
Le flethi idibanisa ubuhle bokusetyenziswa kwasemaphandleni kunye nefenitshala yale mihla. Indawo yomlilo inezinto ezikhethekileyo, ngokukodwa ngexesha lonyaka elibandayo. Kwiyadi ekufutshane ungahlala phandle okanye igrili.
Ukusuka apha kukuhamba imizuzu eyi-10 ukuya eTettnang kunye nemizuzu eyi-10 ngemoto ukuya eLake Constance.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ipholile ibe intle kakhulu ngenxa yokusetyenziswa kwezinto zendalo, umphantsi wamaplanga endalo kunye nesilingi yeplanga endala. Ehlotyeni, iindonga zendlu ezinkulu ziqinisekisa ukuba kukho imozulu epholileyo ngaphakathi. Iflethi ikumgangatho osezantsi kwaye isitulo esinamavili siyafikeleleka.
Indawo yomlilo enefestile enkulu ikwindawo yokuhlala kwaye yenza kubekho imeko entle nekhaya, ngokukhethekileyo ekwindla nasebusika. Ekubeni le flethi ingekho ngqo kwiLake Constance, kodwa ngebhayisekile okanye ngemoto kulula ukuyifikelela, ukude nendawo ephithizelayo yabakhenkethi uze wonwabele uxolo nokuzola okumnandi.
Iintsapho ezinabantwana zihlala kule ndawo. Ngenxa yendawo yasemaphandleni, akukho ngxolo apha, kodwa awukho kude esixekweni naseLake Constance.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Tettnang